Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » USA Akụkọ Akụkọ » IMEX Q na A: Enwere ihe dika ihe na-esota?
IMEX Virtual Ihe
Na IMEX Q na A na SAP Global Marketing na-atụle inyere ndị ọkachamara mmemme aka imeghari ma nwee ọganihu na usoro ọzọ.
Ọha obodo azụmahịa kwesịrị iji nlezianya mee atụmatụ n'ihu, na-echebara nnukwu mgbanwe ụwa anyị nwetara site na COVID-19.
Kedu ihe dị mkpa nke nchịkọta data na nghọta ndị na-ege ntị na nkịtị?
Akwadoro ntụkwasị obi ika site na ịkwaga ahịa na atụmatụ dijitalụ.
IMEX CEO Carina Bauer ga-agba ajụjụ ọnụ banyere Nicola banyere ọrụ ya na imepụta usoro mmemme SAP na IMEX Q na A, ma ha ga-abanye n'ime nnukwu ajụjụ atọ dị n'ihu nke uche maka ndị ọkachamara na-eme ihe omume na-eme atụmatụ iji nwetaghachi nzube: mkpa nke data- nchịkọta na nghọta ndị na-ege ntị; otú nkwanye ika si metụta ntụkwasị obi site na ịkwaga na dijitalụ; na otu esi eme ka odi nma inyocha usoro SAP nke di n'ihu na atumatu ihe omume tinyere gburugburu ebe obibi na ihe omume CSR.
Enwere ihe dị ka nkịtị ọzọ? Nke ahụ bụ ajụjụ Nicola Kastner, VP, Global Head of Event Marketing Strategy maka SAP, ga-enyocha na Q&A dị n'ịntanetị nke ndị IMEX Otu. Ndebanye aha na-emeghe ugbu a maka nnọkọ n'efu - "N'okporo ụzọ iji nwetaghachi nzube, enwere ihe dị ka ihe na-esote?" - na-eme na Eprel 21.